फेसबुकमा लभ परेर होटल बोलाइएकी युवती आफ्नी बुहारी परेपछि… भिडियो
January 3, 2022 January 3, 2022 AdminLeaveaComment on फेसबुकमा लभ परेर होटल बोलाइएकी युवती आफ्नी बुहारी परेपछि… भिडियो
सामाजिक सञ्जाल लभ अफेयर चलाउने गतिलो साधन भएको छ । कहिल्यै नभेटका र नदेखेकाहरु फेसबुकमार्फत सहजै साथी बन्छन् । कतिको घरबार बिग्रिएको छ भने कतिले बिहेबारी समेत यही फेसबुकले गराइदिएको छ ।”
तर, चीनमा एउटा यस्तो घटना भएको छ, अनलाइनमा साथी बनेर भेट्न जाँदा ससुरा बुहारी पो परेछन् । एकआपसमा भेट्दा यी दुबै जना लाजले पानी पानी मात्रै हुनु परेन्, बाबुले छोराको कुटाइ समेत खानुपरेको समाचार एजेन्सीहरुले जनाएका छन् ।”
घटना चीनको हेलोगजियांग प्रान्तको हो । यी ससुरा र बुहारी दुबैले आफ्ना पति पत्निलाई झुक्काएर च्या’ट गर्थे । दुवै जनाले आफ्नो नाम र फोटो समेत बदलेका थिए । अनजानवश च्याटमा भएको भेट र कुराकानी माया प्रेममा परिणत हुन थाल्यो ।”
यसो त ५७ बर्षीया वांगलाई अनलाइनमा साथी बनाउने र च्या’ट गर्ने लत नै थियो । वांग आफ्नै बुहारीसँग कुरा गर्दा आफू एउटा कम्पनीको निर्देशक भएको भनेर ढाँट’थे, श्रीमतीको मृत्यु भइसकेकाले आफू एक्लै भएको ती महिलालाई बताउथें ।”
बुहारी लिली पनि के कम ? उनी आफ्नो श्रीमान जेलमा रहेकाले छोरासँग मात्रै बस्दै आएको बताउँदै आएकी थिइन् । हरराति यी दुईबीच च्या’ट्मा कुरा हुन्थ्यो । पछि फोटो पठाउने कुरा भयो । अनि दुबै जनाले आफ्ना साथीका राम्रा फोटो पठाइदिए ।”
फोटो हेरिसकेपछि दुबैजनाले बेलुकी स्थानीय होटेलमा ६ बजे भेट्ने तय गरे । लिली र वांगबीच होटेलमा भेट्ने तय भएकै दिन लिलीका श्रीमान यात्राबाट घर पर्किए ।”
उनले च्याटबारे सबै जानकारी पाएपछि दुबैलाई रंगे’हात समात्न होटलतिर लागे । लिली जब होटेलमा गएर कोठा ढकढकाईन् त्यसपछि ढोका खोल्दा आफ्नै ससुरा पो परेछन् ।”
पछि श्रीमान पनि लिलीलाई पछ्याउँदै होटल पुगेपछि लफ्डा सुरु भयो । लिलीका श्रीमानले बाबु र श्रीमतीलाई कुट’पिट गरेपछि प्रहरी आइपुग्यो । अहिले फेसुबक लभको को चक्करमा प्रहरीले ससुराबुहारीलाई केरकार गरिरहेको छ ।”
लाईभमा छाडा बोलेको भिडियो
मलाई दिनकै से:क्स गर्न मन लाग्छ,, के गर्ने होला…?
टिकटकमा भाइरल अश्मिता रनपाल, यस्तोसम्म गर्न सक्छिन! हेर्नुहोस उनको दुनियाँ चकित पार्ने प्रतिभा !
के विवाह गर्नैपर्छ ? विवाह नगर्दा के हुन्छ र ?
सरकारी कर्मचारीले आफ्नै सहकर्मी महिलालाई भिडियो कल गर्दा गर्दै होस गुमाएपछि
काठमाडौँमा घर र कार भएकी युवतीलाई, घरज्वाई बस्ने केटा चाहियो
वर्ष मा आउने श्री’मा*न लाइ कुरेर के ज’वा’नी खे’र फाल्नु,,कोहि छ प्या’स मे’टाउने
देवर भाउजू काण्ड भाग ५ : अन्ततः देवरले भाउजूलाई छोड्ने नै भए,देवर आफ्नै श्रीमतिसगँ मिल्ने भएपछि भाउजू परिन् अलपत्र(भिडियो हेर्नुस)
मेरो चित्त बुझाउनु सक्नेले मलाई सम्पर्क गर्नु होला रात भरि मज्जा दिने छु
जोडी स्कुल बिदा भए पछि अटोमा नै सुरु भए पछि भिडियोको लागि फोटोमा क्लिक गर्नुहोस !
शिव को दर्शन गरि माघ ०३ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल